Teeknolojiin Sinimaagraafii garaagarummaa fotoofi viidiyoo jidduu jiru dhiphisaara - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Teeknolojiin Sinimaagraafii garaagarummaa fotoofi viidiyoo jidduu jiru dhiphisaara
Teeknolojiin Sinimaagraafii garaagarummaa fotoofi viidiyoo jidduu jiru dhiphisaara
Kan ilaaltan hundi suuraadha malee viidiyoo miti-sinimaagraafii jechuun isa kana
Ilmi namaa teeknolojitti dhimma bahuudhaan waan haarawa uum. Kan uumames jijiira ykn fooyyessa. Wontoota teeknolojiin uumeefi yeroodhaa yerotti fooyyesseef midhaagese keessaa viidiyoofi suuraan isaan tokko. Suuraafi viidiyoon wolqabatee wonti hedduun keenna beeknu suuramaafi viidiyoodha. Animation addaddaas jiru. Isaanis yeroo heedu bifuma viidiyootiin dhihaatu. Kanaaf hedduun keenna animation akkuma viidiyootti ilaalla, hubanna.
Amma gaaruu, dhalli namaa kan waan haarawa uumuu irraa hinboqanne, daangaa saayinsiifi teeknolojii fundurattii dhiibuu irraa ufhinqusanne, sinimaagraaf (Cinemagraph) waan jedhamu uumeera. Cinemagraph suuraafi viidiyoo wolsimsiisaa akk tokkotti agarssisa. Kuni kan danda’ame qaama suuraa tokkoo animation gara viidiyootti geeddaruudhaan. Jamii Beek uumaa Cinemagraph ti.
Suuronni asii gadii Cinemagraph maal akka ta’e hubachuuf isin gargaaru. Tarii yeroon nutis suurota keenna (kan dur kaanes ta’e kan ammaa) Cinemagraph itti dhimma bayuudhaan rifeensa keenna sochoosnu (shamarran) ykn afaan banaa kolfinu fagoo hinta’u.
Previous articleTaphoonni waancaa kubbaa miilaa Aafrikaa (CAF) 30ffaan har’a Ekuwaatooriyaal Giinii keessatti eegala
Next articleHuman Rights Watch Itoophiyaan miidiyaa wolabaa doorsisti, hujiin ala taasisti jedha